အိမ်နောက်က မြက်ခင်းစိမ်းတွေလွှမ်းတဲ့ မြေပြင်ပေါ်မှာလှဲလျောင်းရင်း ကျယ်လွှင့်တဲ့ ကောင်းကင်ပြာပြာကို မော့ကြည့်မိ တော့ ... ဟော ဟိုးမှာမြင်လိုက်ရတဲ့ ရောင်စုံတိမ်တိုက်တချို့က ဖားလျားဝေဝေ ဆံနွယ်ရှည်တွေလွင့်နေတဲ့ မိန်းမပျိုလေး တဦးလိုလို။ လွင့်နေတဲ့ ဆံနွယ်ကလေးတဝိုက်ကို မှန်းဆပြီး သူ့လက်ထဲမှာ ခူးဆွတ်ထားတဲ့ မြက်ပန်းဝါဝါလေးကို မမီမကမ်း လှမ်းပန်ပေးဖို့ကြိုးစားရင်း မထိတထိဖြစ်နေတာကိုပဲ တခစ်ခစ်ရယ်မောမိတယ်။ ဟောကြည့်စမ်း။ ကြည့်နေရင်းမှာကို မိန်းမ ပျိုကလေးရဲ့ ဆံနွယ်တွေ မရှိတော့ဘူး..။ မျက်စိတမှိတ် လက်တဖျစ်အတွင်းမှာပဲ မိန်းမပျိုလေးကနေ ဖြူဖွေးအိနေတဲ့ ယုန် ကလေးတကောင် ဖြစ်သွားပြန်ပြီ။ လက်ထဲကပန်းဝါဝါလေးကို ယုန်ကလေးရဲ့ ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့လေးသမ်းနေတဲ့ နား ရွက်ရှည်ရှည် ထိပ်ဖျားကလေးမှာ ချိတ်ပေးဖို့ကြိုးစားနေတုန်း ဗြုန်းဆို ရောင်စုံတိမ်တိုက်တွေဟာ တဖြေးဖြေး မှိုင်းညှို့မည်း မှောင် ဘီလူးကြီးတကောင်လို။
မိုးရွာတော့မယ်။ မြက်ခင်းစိမ်းပေါ်ကနေ ရုတ်တရက်ထပြီး အိမ်ဆီကို အမြန်ပြေးနေတဲ့ သူ့နောက်ကို တိမ်မည်းညိုအုပ်ကြီးက အမှီလိုက်လာသလိုပဲ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးလည်း မိုးရေတွေနဲ့ ရွှဲရွှဲနစ်လို့။ မိုးရေစိုလက်စနဲ့ စိမ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကို လျှော်ဖို့ အိမ်ဘေးအုတ်ရေကန်ဘက်ကို ထွက်ခဲ့တယ်..။
လက်ထဲက အဝတ်တချို့ကိုစုကိုင်ရင်း. ကျောက်ပြားပေါ်လွှဲ လွှဲပြီးရိုက်လိုက်တယ်။ အမေကတော့ ဒီလိုအဝတ်တွေကို တ အားရိုက်လျှော်တာ မကြိုက်ဘူး။ သူကတော့ ကြိုက်တယ်။ ဒီမှာကြည့်လေ။ အဝတ်တွေကို လွှဲရိုက်လိုက်တိုင်း အဝတ်တွေ ထဲက ရေစက်အမှုံအမန်တွေဟာ ရှေ့ကအုတ်ရေကန်နံရံပေါ်ကို ဖြာခနဲ ဖြာခနဲ လွင့်စင်ထိမှန်။ ပုံရိပ်တွေ ပုံရိပ်တွေ။
အိုး ... ဒါဟာ.. ထန်းတောညို့ညို့။ ဟောဒါ..…ပင်စည်သွယ်သွယ်မြင့်မြင့်တွေ..။ မိုးယံကို စွင့်တက်သွားပြီ..။ ဒါက…အ ဆင့်ဆင့် ယှက်သွယ်ထပ်ရပ်နေတဲ့ ထန်းရွက်တွေလား..။ အို..သူသာပန်းချီဆွဲခွင့်ရရင် ဒါတွေဟာ ထန်းရွက်တွေမဟုတ် တော့ဘူး..။ အရောင်တွေ.. အရောင်တွေ.. ဖြစ်နေမှာ။ အစိမ်းနုနဲ့ စိမ်းရင့်ကြားမှာ စိမ်းယောင်ဆောင်နေတဲ့ အပြာတွေက လည်း မှိုင်းမှိုင်းဝေဝေ… ရောယှက်နေမယ်။
နေခြည်နဲ့ ထိနမ်းခွင့်ရတဲ့ ဝင်းပမှုတွေက မခို့တရိုဝါ တချို့ပေါ့။ ညို့ညို့ညိုနေတဲ့နေရာလေးက သူ့ခမျာ အလင်းဓါတ် အပြည့်အဝမရရှာဘူးလို့ ပြောနေမှာ။ အခုတော့ အုတ်နံရံပေါ်က အရောင်မဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပဲ။ ဒါက..ယင်းထောင်ယင်းစွဲ။ ဟော..ဒါက မြူအိုး။ ဟောဒါက..အမြှုပ်တစီစီထနေတဲ့..ထန်းရည်ချိုချိုပုလင်းလေးတွေ..။ လျှာမှာ အလိုလို စိမ့်လာတဲ့ အရည်တချို့ကို အသာမျိုချရင်း..ထန်းရည်နံ့မွှေးမွှေးကိုတောင်.. ရလာသလိုလို..။ အံမယ်...ခွေးလေးတကောင်တောင် ပါသေးတယ်..။ ထန်းတက်သမားရဲ့ခွေးလေးဖြစ်မယ်..။ ဟိုဘက်က ထန်းတက်သမားရဲ့ဇနီးထင်ပ…။ ကြွက်ကြော်နံ့မွှေး မွှေးကလေး လား..။ ထန်းတောကြီးအလယ်များ..ရောက်နေပြီလား.။
ကြည့်နေရင်း.. ကြည့်နေရင်း… အရာရာဟာ မှုန်ဝါးပျောက်ကွယ်..။ အုတ်နံရံပေါ်မှာ အပေါ်ကနေအောက်ကို တဖြေးဖြေး စီး ကျလာတဲ့ရေတွေက နံရံတပြင်လုံး.စိုစိုရွှဲသွားပြီ..။ ခုန မြင်ခဲ့ရတဲ့ ထန်းလက် ထန်းရွက်တွေ.. တစိုးတစမှ မရှိတော့..။ ပျောက် ကွယ်သွားတဲ့ ထန်းတောကြီးကိုနှမျောတသနေတဲ့ စိတ်အာရုံက လျှော်လက်စ အဝတ်ပုံကြီးဆီကို.. ပြန်ရောက် သွားတယ်..။ .အဝတ်တွေကြားထဲက ရေနူးနေတဲ့ ဆပ်ပြာတုံးကို ဘေးဖက်ကို ကပျာကယာ ဖယ်လိုက်ရတယ်..။ လက်ထဲ မှာ ပျော့တွဲနေတဲ့ ဆပ်ပြာအစအနတွေ ကပ်ပါလာတာကို အဝတ်ပုံထဲက အဝတ်တချို့ပေါ် ကဗျာကယာ သုတ်လိုက်တော့..။ ဟာ..ဆပ်ပြာ ဝါဝါတွေ အခဲလိုက် အဖတ်လိုက်..အောက်က ခရမ်းရောင် အဝတ်ပေါ် တင်နေတာ..လှချက်.။ နောက်ထပ် ဆပ်ပြာတချို့ကိုလက်နဲ့ကော် ယူပြီး..အဝတ်အပြာ..။ အဝတ်..ပန်းရောင်..။ အဝတ်..အနီ..။ အဝတ်..ရွှေအိုရောင်..။ အ ဝတ်..အသည်းကွဲရောင်တွေပေါ်ကို ထပ်..ထပ်ပုံလိုက်တယ်..။ ပစ်..ပစ်..ကျဲလိုက်တယ်။ ဟော..ရောင်စုံပန်းခင်း..တခင်း.။
ဆပ်ပြာမြှုပ်ဖြူဖြူမွမွတွေက..အသွေးအရောင်စုံပန်းခင်းကြီးအပေါ်က တိမ်တိုက်တွေ....။ တိမ်တွေကို ဟိုတစ..ဒီတစ လက် နဲ့ကိုင်ပြီး နေရာချကြည့်တယ်..။ တိမ်ကလေးတချို့က…ခဏနေတော့ ပျော်ကျသွားပြန်...။ မရှိတော့..။ ဆပ်ပြာမြှုပ် တိမ်တိုက်အသစ်တွေ ထပ်..ထပ် ဖန်ဆင်း..။ လေနှင်ရာလွင့်နေတဲ့ တိမ်တိုက်တွေလို...ပေါ်လိုက်…ပျောက်လိုက်..။
“ဟဲ့..ကောင်မလေး.။ အဝတ်ကို ဒီလောက် စိမ်လျှော်နေရသလား...။ အအေးပတ်တော့မယ်”
အမေ့ရဲ့မြည်တွန်တောက်တီးသံက..ရောင်စုံပန်းခင်းကြီးကို တစစီ ..ချေမွ.ဖျက်ဆီးလိုက်သလို..။ ထန်းတောညို့ညို့လည်း မရှိတော့..။ ရောင်စုံပန်းခင်းလည်း မရှိတော့..။ ရွှေဝါဆပ်ပြာတတုံးလုံးလည်း မရှိတော့..။
“ဟုတ်ကဲ့..အမေ…။ ပြီးပြီ..။ ပြီးပြီ..”
ငပိစိမ်းစားနည်းနည်းခပ်ထားတဲ့ဟင်းချိုအိုးလေးက ပွက်ပွက်ဆူပြီးငပိနံ့ပျောက်ကာ မွှေးလာပြီ။ ပုစွန်ခြောက်ဝါဝါကလေးတွေနဲ့.ကြက်သွန်ဖြူ လေးစိတ်ကွဲဖြူဖြူကလေးတွေက တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့ ချာလပတ်လည် ဝှေ့ယမ်းကခုန်နေသလို..။ ကြက်သွန်နီကိုလည်း..အကွင်းလိုက်..အကွင်းလိုက်ကလေးလှအောင်လှီးထားပြီးပြီ..။စိမ်းညွန့်သစ်နေတဲ့ ဆူးပုတ်ရွက်နဲ့ ယင်းတိုက်ရွက်နုနု..ဖူးပုရစ်ကလေးတွေကလည်း မြမြစိုလို့..။ အပင်ပေါ်က ကြွေခါစ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်…သခွပ်ပွင့်ဖြူလွလွလေးတွေရဲ့ထိပ်ဖျားလေးတွေ ကိုလည်း..အသာအယာဖြတ်ပြီးသား...။ ညိုတိုတို ခပ်ချိုရိုးနွဲ့ နွဲ့နှောင်းနှောင်းလေး တွေကိုလည်း..အဆစ်လိုက်အပိုင်းလိုက် ဖြတ်ထားပြီးသား...။ အောက်ခံ ဝါးဇကာ ဝါဖျော့ဖျော့..ကလေးထဲမှာ..ဟင်းချိုခပ် အရွက်ကလေးတွေက..သူ့အပုံနဲ့သူ..လှလှပပ.မျက်စိပသာဒ။
ဟင်းချို ဆိုတာ မြန်မာ့ရိုးရာထမင်းပွဲတွေမှာ အဓိကကျတဲ့ ဟင်းတမျိုး..။ ချက်ရတာလွယ်တယ်ထင်ရပေမယ့် ဟင်းချိုကောင်း တခွက်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လောက်ပညာပါတယ်ဆိုတာ..လူတိုင်းမသိဘူး..။ အစပ်အဟပ်ကလည်း အရေးကြီးတာမို့ ကြည်လင် နေတဲ့ ဟင်းချိုရည်ပူပူကလေးကို အပေါ့အငံမြည်းရင်း အရသာခံလိုက်တယ်..။ ဟင်းချို ရည်တွေ မဲနောက်နေရင် ဘယ်လူကသောက်ချင်စိတ်ရှိမလဲနော်..။ အင်း..နည်းနည်းပေါ့တယ်..။ ဆားကလေး မျှင်မျှင်ထည့်လိုက်မယ်..။ အိမ်ကလူ.. ခုတ လော သွေးတိုးချင်နေတယ်.. အငံတော့ နည်းနည်းလျှော့မှ..။
ဟင်းချိုအိုးကို ခဏထားပြီး ငရုပ်ဆီရောင် လွှမ်းနေတဲ့ မဆလာနံ့သင်းသင်းနဲ့.. ကြက်သားဆီပျံဟင်းကိုဟင်းခပ်ပန်းကန်ထဲ အသာခပ်ထည့်တယ်...။ သားကြိုက်တဲ့ ရင်ပုံသားလေးရယ်..အသည်းအမြစ်ရယ် ရွေးခပ်ရင်း ပန်းကန်နှုတ်ခမ်းပေါ် ကျသွား တဲ့ ဟင်းစက်တချို့ကို တရှူးစနဲ့ အသာသုတ်လိုက်ရသေးတယ်.။
ဖန်ရောင်လက်လက်ပန်းကန်သေးသေးထဲမှာ.. ငပိရည် ပျစ်ပျစ် ညိုရင့်ရင့်.။ အဖျော်ကြက်သွန်ဖြူ လေးစိတ်ကွဲနဲ့ ငရုတ်သီး စိမ်းစိမ်းဖတ်ကလေးတွေကို ဟိုတစ..သည်တစအမြင်လှအောင် ဇွန်းကလေးနဲ့အသာမွှေပေး..။ တို့စရာထည့်မယ့် ကြွေပန်း ကန် အဖြူဆွတ်ဆွတ်ကလေးပေါ်မှာ ခရမ်းဂျွတ်သီးလေးတွေက ခရမ်းရင့်ရောင်တောက်ပ..။ ဒညင်းသီးအခြမ်းတချို့က..ဝါဝါညိုရွှေ..။ သစ်ပန်းကန်ရွက် အညွန့်နီနီ.လေးတွေနဲ့ မုန်လာဥနီနီ..။ ပြီးတော့..ရုံးပတီသီး စိမ်းနု။ ပူစီနံနဲ့မြင်းခွာရွက်စိမ်း ရင့်..။ နီဝါရွှေ..စိမ်းနုရင့်..။ ဒါလည်း ပန်းချီကားတချပ်ပဲ..။ သူ့နေရာနဲ့သူ စားချင့်စဖွယ်..မျက်စိပသာဒ..။
သစ်စေးရောင်ရင့်ရင့် ယွန်းထမင်းအုပ်ထဲက ထမင်းဖြူဖြူ..ပူပူနွေးနွေး.. အငွေ့ တထောင်းထောင်း..။ ထမင်းစားကြွေပန်း ကန်ဖြူ လွလွလေးတွေကလည်း.. ပန်းကန်နှုတ်ခမ်းမှာ အပြာရောင် ပန်းခက်ကလေးတွေ နွယ်လို့..။ ဟင်းချို အိုး အရွက်ခပ် ရမယ့် အချိန်ရောက်ပြီ..။ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ဟင်းချိုရည်ထဲကို ခပ်ချိုရိုးကလေးတွေကို အရင်ထည့်..။ ခပ်ချိုရိုးကလေးတွေ အိသွားပြီဆိုမှ..ကြက်သွန်နီအကွင်းရယ်..ဆူးပုတ်နဲ့ယင်းတိုက်ရွက်စိမ်းစိမ်းကလေးတွေ ဖျပ်ခနဲထည့်..။ နောက်ဆုံးမှ အနု ဆုံး ..သခွပ်ဖျားကလေးတွေ ထည့်လိုက်တယ်..။ မီးဖိုခလုပ်ကို အမြန်ပိတ်ပြီး..ဟင်းချိုအိုးကလေးကို တချက်မွှေလိုက်တယ်..။ ဟင်းချိုပန်းကန်စောက်.. လိမ္မော်ရင့်ထဲကို ဟင်းချိုခပ်ထည့်ရင်း..အရွက်တွေ အရောင်ပြောင်းမသွားဖို့ အရေးကြီးတယ်..။
သခွပ်ဖျားလေးတွေက..မှန်ရောင်ထနေရမယ်..။ ယင်းတိုက်ရွက်ကလေးတွေကလည်း စိမ်းလတ်နေဖို့ အရေးကြီးတယ်..။ ဟင်းခပ်ရွက်တွေ နွမ်းသွားတဲ့ဟင်းချိုလောက် စားချင်စိတ်ပျောက်တာမရှိဘူးလို့ ကိုယ့်ဖာသာ တိုးတိုးပြောရင်း.ထမင်းစား စားပွဲပေါ်မှာ....ဟင်းခွက်တွေကိုနေသားတကျ စီစဉ်လိုက်ရင်း.. လက်ထဲက ဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ပြင်နေတုန်း..
“ကျက်ပြီ..ကျက်ပြီ..။ ကဲ..သားအဖတွေလာ..ထမင်းစားရအောင်” လို့ ကမန်းကတန်းပြန်အော်ရင်း …သူ့ဟင်းချက်အနုပညာ လက်ရာကို မှတ်တမ်းတင်ထားဖို့.. ကသောကမျော အမိအရ..ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်ရသေးတယ်..။
သူ.သေချာပြင် ဆင်ထားတဲ့ ပန်းချီကားတချပ်လို လှပဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ထမင်းစားပွဲလေးဟာ.. ခဏကြာရင်.. လေနှင်ရာ လွင့်သွားတဲ့ တိမ်တွေလို..တစစီပျောက်ပျက်သွားဦးမှာ မဟုတ်လား..။
ကင်းဗတ်စပေါ်ကို....အပြာ..ခရမ်း..ပန်းရင့် အညိုမောင်းမောင်း....စုတ်ချက်တွေ ခုန်ပေါက်ဆင်းသွားကြ..။ အဝါနု..အဝါရင့် တွေကို ကင်းဗတ်စပေါ် များများ ညှစ်ချသွန်ချ…ကျဲပက်ချ။
အနီရင့်ရင့်သုတ်လိမ်းစေးပျစ်နေစေတဲ့ စုတ်တံကို..အဝါရောင်တွေအနားမှာ တိုထိကစား..။ အဝါနဲ့အနီ ဟိုတစ သည်တစ..တို့ထိရင်း သူ့အလိုလို ရွှေအိုရောင်ယှက်သန်း။
ရွှေအိုရောင်တွေ....ပျော့အိတွဲကျနေရမယ်။ ပျော့အိတွဲကျနေတဲ့ ရွှေအိုရောင်တွေဟာ တောက်ပခမ်းနားနေပေမဲ့ လဲလျောင်း နေတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာသဏ္ဌာန်ပေါ်မှာ လေးလံနေရမယ်..။ ပိကျနေရမယ်..။ နံရံကျဉ်းကျဉ်းတွေ..မီးခိုး..။ ခရမ်းပြာ..။ မှိုင်းပြာ..။ နက်ပြာ..။ မှောင်ပိတ်..။ ပိ..။ အိ..။ ဖိ..။ ဆန့်တန်းနေတဲ့ ခြေထောက်သဏ္ဌာန်တွေဟာ..တံခါးပေါက်ဆီကို ဆန့်နိုင်သမျှ..ဆန့်တန်း..။ ထွက်ပေါက်နဲ့ဝင်ပေါက်တပေါက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ တံခါးဝမှာ အလင်းတွေဖြာဖို့..။ အပြာ..အပြာ..။ အဖြူတွေ အထပ်လိုက်. အပုံလိုက်ပုံချ.။ ဆွဲဖြန့်..။ အပြာနဲ့အဖြူရောယှက်ပြီး လင်းလက်နေရမယ်..။ ပြီးတော့...အလင်းဆီ သွားရာ.လမ်း။ အလင်းကိုငံ့လင့်နေတဲ့ ရွှေအိုရောင်အောက်က..ဝိညာဉ်ဟာ အလင်းစက်တွေဆီသွားဖို့ ရုန်းထနေရမယ်..။
ဝိညာဉ်ဟာ တောက်ပခမ်းနားနေပေမယ့် မွန်းကျပ်ပိတ်ဆို့နေတဲ့အခန်းထဲက လွတ်မြောက်နေလိုစိတ်တွေ ရုပ်လုံးပေါ် ကြွ နေရမယ်..။ တောက်ပခမ်းနားတဲ့..ရွှေအိုရောင်လှုင်းတွေအောက်က လွန့်လူး..ရုန်းထမှုတွေနဲ့ မြင်းကပါရွာက မနူဟာ..။
စုတ်တံကိုင်ထားတဲ့ လက်တွေဟာ နဲနဲတုန့်သွားတယ်..။ နောက်ကို လှည့်မကြည့်ပေမယ့်..တံခါးဖွင့်သံနဲ့အတူ…တံခါးပေါက် က မျက်လုံးတစုံဟာ..သူ့ကျောပြင်....။ သူ့အရောင်တွေ..။ သူ့လက်တွေ..။ သူ့စုတ်ချက်တွေကိုကြည့်ရင်း..အဓိပ္ပါယ် အမျိုး မျိုး..ရှာဖွေဖွင့်ဆိုနေမယ်ဆိုတာ..လှည့်မကြည့်ပဲ..အလိုလိုသိနေတယ်..။
“ဒီအရွယ်ကျမှ..ဘာလို့ စိတ်ရှုတ်ထွေးစရာ.. အဓိပ္ပါယ်ဝေဝါးစရာ..နားမလည်နိုင်တာတွေ ဆွဲချင်နေရတာလဲ..။ လောက ထဲမှာ ဆွဲစရာအလှအပတွေ တပုံကြီး..။ ဘုရားပုံကိုဆွဲတာကလည်း ...”
ကြားနေကျ.. စုံစမ်းစစ်ဆေးသဝန်ကြောင်သံလွှမ်းတဲ့ အရာရာ လွှမ်းမိုးချုပ်ချယ်လိုတဲ့ ပိုင်စိုးပိုင်နင်း.လေသံကိုလည်း မပြော ခင်ကြို ကြားနေတယ်..။ ဒါပေမယ့် ..ခါတိုင်းလို.. ဘာသံမှထွက်မလာဘူး..။ တိတ်ဆိတ်နေတယ်..။ ထူးဆန်းပေမယ့် ..မထူး ဆန်းဘူး..။
နောက်ဘက်ကို လှည့်မကြည့်ပဲ.. ဖြေးဖြေးကလေး ပြုံးလိုက်မိတယ်။ ခဏကြာတော့..သူ့စုတ်ချက်တွေဟာ..ခါတိုင်းထက် ပိုပြီး သွက်လက်စွာ.. သူ့လက်ကိုသူ.. ယုံကြည်စွာ.. ထွက်ပေါက်တံခါးဝတဝိုက်မှာ..အဖြူအပြာခရမ်းတွေနဲ့ ယှက်သန်း တောက်ပ လိုက်စေတယ်။ အလင်းရောင်တွေကို သူတွေ့သွားပြီ..။ အလင်းကိုဖမ်းဆုပ်ယူဖို့ နည်းနည်းတော့ ပိုအားထုတ်ရ မယ်လို့တွေးရင်း ပန်းချီကားကို ဒီနေ့အတွက် လက်စသတ်လိုက်တယ်။
Essays Ni July